स्याङजाका मृगौला पिडित अर्जुनद्धारा सहयोगको अपिल – Samacharpati
बिहिबार, चैत्र २७, २०७६
डेढ घण्टामै उल्टियो निर्णय उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णयबाट किन पछि हट्याे सरकार ?
काठमाडौंमा अलपत्र परेकाहरुलाई भोलि र पर्सि बाहिर जान दिने सरकारकाे निर्णय
कुन खानेकुरा खाली पेट खाँदा स्वस्थ्यमा असर पर्छ त ! जान्नुहाेस ति खानेकुराकाे बारेमा
तनहुँको बरादीमा एक कृषि सहकारीले घरघरमै पुगेर तरकारी बिक्री शुरु
कोरोना व्यवस्थापन तथा उपचार कोषमा भाटभटेनी सुपरमार्केटद्वारा २५ लाख सहयोग
भारतमा काेराेनाबाट २४ घन्टा भित्रमात्र १७ जनाकाे मृत्यु
ने.बि.संघ नेता शिव पाण्डेले कोरोना नियन्त्रण कोषलाई ५० हजार सहयाेग गर्ने
चौतर्फी दवाब र प्रयासपछि अन्ततः पोखरा आइपुग्याे बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्ने पिसिआर मेशिन
स्याङजाका मृगौला पिडित अर्जुनद्धारा सहयोगको अपिल
शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६
भुपाल गुरुङ, पोखरा, २ फागुन । दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि स्याङजाको विरुवा गाउपालिका वडा न. ७ किउखोलाका ४० वर्षिया सुक बहादुर दमै (अर्जुन) ले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।
हाल वालिङ नगरपालीका ९ भुम्रेबस्दै आएका अर्जुनको दुवै मृगौला फेल भई हाल पोखरामा डाइलोसिस गर्नुपर्ने भए पछि आर्थीक सहयोग गरेर जिवन रक्षा गरिदिन सबै संग अपिल गरेका हुन् । १२ वर्ष सम्म खाडी मुलुकमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका उनि मृगौला रोग लागेपछि गत वर्ष नेपाल फर्किएका थिए । नियमित डाइलोसिस र मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अस्पतालले भनेपनि परिवारको आर्थीक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले उपचार गर्न सकेका छैनन् ।
विदेशमा काम गरेर पारिवरिक गुजारा चलाउदै आएका पिडित अर्जुनको जिवन रक्षार्थ देश विदेशमा रहेका नेपाली संग आर्थीक सहयोगका लागि उनका धर्मपत्नी मिठु दमैले अपिल गरेकी छिन् । हप्तामा तिन पटक डाइलोसिस गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव भएपनि आर्थीक अभाव कै कारण गर्न नसकेको उनि बताउँछिन ।
दुई छोरा र एक छोरीको बुवा समेत रहेका अर्जुनको मृगौला प्रत्यारोपणका लािग करिव २० लाख लाग्ने चिकित्सकले बताए पनि रकम अभावका कारण पकृया अगाडि बढाउन नसकेको बताइन् । पछिल्लो समय एक साता देखि गण्डकी मेडिकल कलेज पृथ्वीचोक पोखरामा उपचार गरिरहेका अर्जुनलाई सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संघसंस्थाले प्रत्यक्ष अस्पताल मै गएर दिन सक्ने परिवारजनले जनाएको छ ।
रुपा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन बुधबारदेखि खाली
विश्वका प्रमुख नेताहरुसँग यो महामारीकाे बेला राजनीतिकरण नगर्न डब्ल्यूएचओकाे आग्रह
आफ्नै खर्चबाट डोटीका सांसद आलेद्धारा स्वास्थ्य कार्यलयलाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
कोरोना सङ्क्रमणबाट लण्डनमा बस्दै आएका एक नेपालीको मृत्यु
गाउँपालिका भित्रिने नाकामा सुरक्षा दिन म्यादी प्रहरी भर्ना गदै हतुवागढी गाउँपालिका
बयरघारीमा हाटबजारले कृषक उत्साहित
नेपाल छन्त्याल संघ, कास्कीको अध्यक्षमा सु. धनबहादुर भलञ्जा छन्त्याल
दोलखामा भालुको आक्रमणबाट एक वृद्ध घाइते
मूर्तिसंगै रमाउँदै ताइवानका मूर्तिकार लिन लि जेन